Obama oo shaacinaya isbadal dhanka socdaalka ah - BBC News Somali
Obama oo shaacinaya isbadal dhanka socdaalka ah
Image caption Madaxweynaha Mareykanka Barack Oabam
Aqalka Cad ee looga taliyo waddanka Mareykanka ayaa sheegay in Madaxweyne Obama uu u isticmaali doono khudbadda uu ka jeedinayo taleefishinka maanta oo Khamiis ah in uu kaga dhawaaqo dib u habeyn weyn oo lagu sameynayo nidaamka socdaalka ee Mareykanka.
Waxaa la filayaa in madaxweynuhu uu sheegi doono in uu u adeegsan doono awoodiisa sare si uu isu hortaago in ilaa shan milyan oo muhaajiriin ah laga dhoofiyo dalkaasi oo waxa uu siin doonaa warqadaha ogolaanshaha shaqada.
Mr Obama ayaa arrintan ku sheegay muuqaal la soo dhigay barta uu Aqalka Cad ee Mareykanka ku leeyahay Facebook-ga ka hor khudkabadda maanta.
Waxaa la aaminsan yahay in 11 milyan oo qof ay si sharci darro ah ugu nool yihiin dalka Mareykanka - qaar badan dadkaasi waxay ka soo gudbeen bartmaha America, waxaana ku jira caruur iyaga iskeenay.
Khudbad xilliga aadka loo daawado telefishinada uu dalka oo dhan u jeedin doono ayaa Madaxweynuhu kaga hadli doonaa sida uu wax uga qabanayo dhibaatadan. Waxaa loo maleynayaa in khudbadiisa ay ku jiri doonto qorshooyink laga badbaadinayo ilaa shan milyan oo qof inaan la dib loo celin, oo la siin doono sharci ay ku shaqeystaan.